USB-C kune mheni chiteshi chetambo kune yako iPhone uye MacBook | Ndinobva mac
USB-C kune mheni chiteshi tambo ye iPhone yako uye MacBook
Nekutengwa kweiyo nyowani MacBook Pro modhi iyo mitsva USB-C madoko akaverengerwa kune zvese zvatinofanira kubatana nazvo, ine zvayakanakira nezvayakaipira. Isu tese tinoziva kuti shanduko inonzwisisika yechiteshi cheUSB yaive iyi, kuti yakava chiteshi cheazvino cheUSB-C icho Apple yakatotanga kuita mune ese makomputa mamodheru ayo achangobva kuisa pamusika.
Nekudaro, iyo iyo yakasara yevagadziri kana kuti iyo Apple premium inosanganisa mune mamwe madivayiri ekubatanidza tambo dzinopera kune rimwe remativi ayo mu plug ye USB-C ichiri kutora nguva yayo uye musika unogadzikana zvishoma nezvishoma kune ichi chitsva chiyero.
Kana isu tikatenga iPhone, iyo iPad kana kunyange Apple Watch, tambo iyo yatinopihwa ndeimwe iyo kune imwe mugumo inobatana kune USB 3.0 chiteshi, iyo isingadzoreke uye iri yakakura kwazvo. Zvino kana isu tikatenga iyo MacBook of the nyowani ne USB-C zviteshi, nguva dzese dzatinofanira kubatanidza chimwe chinhu kwachiri tichafanira kushandisa maadapter izvo zvatakakuudza nezvazvo mune zvimwe zvakawanda zvinyorwa.
Mune izvi, zvakadaro, isu tafunga kutsvaga tambo sarudzo, inogadzirwa kunyanya kune zvigadzirwa zveApple uye zvinozivikanwa kuti imwe yemipendero yayo ine mapini echiteshi chemheni chemidziyo yeIOS nepo imwe yekupedzisira iri chengarava. C, yatinogona kubatana nayo, semuenzaniso, yedu iPad, zvakananga kuMacBook yedu ine USB-C zviteshi.
Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezve iyi tambo unogona kushanyira iyo next link uye izvo zviri pasi pe 9 euros Unogona kuve netambo yakagadzirwa neakateedzana meshes yekudzivirira kuitira kuti isatsemuke kana tikatambanudza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac makomputa » USB-C kune mheni chiteshi tambo ye iPhone yako uye MacBook